I-VPN ehamba phambili yeDisney Plus (2020) - Buka noma ikuphi kalula - Ezokuzijabulisa
Ngabe ufuna iDisney Plus VPN? Kunezinketho eziningi ezingenzeka ku-inthanethi. Uzothola into yamahhala, ezinye eziyimali ekhokhelwa kuqala. Vele, akukaze kube ngumqondo omuhle ukusebenzisa insiza yamahhala ye-VPN, kepha kuthiwani uma kufanelekile? Okubaluleke kakhulu, kuthiwani uma uthatha isinqumo sokuthola i-VPN ye-premium yeDisney plus kodwa ungazi ukuthi ukhethe yiphi?
Ungakhathazeki! Lolu hlu lunama-VPN aphezulu weDisney Plus azokulethela ukusakazwa okungapheli kokuzijabulisa. Ngakho-ke, ake siqale!
Kungani udinga i-VPN yeDisney Plus?
Uhlelo lokusebenza olulindelwe kakhulu lwe-Disney + selufikile, futhi luthola ukuthandwa okukhulu. Awudingi ukulinda isiteshi esijwayelekile seDisney ukuze ubuke okuqukethwe kwakho okuthandayo okuvela kwaDisney. Ngosizo lweDisney Plus, unga bukela konke iDisney ungumnikazi wohlelo lokusebenza. Okubaluleke nakakhulu, inokuhambisana kwendawo yonke okufanele kusetshenziswe ngamadivayisi amaningi!
Noma kunjalo, ungahle ungafinyeleli ku-Disney esifundeni sakho. Ngenkathi iDisney ikhula njalo emhlabeni wonke, amanye amazwe awakuvumeli lokho. Kwezinye izindawo, iDisney ibhekene nezinselelo ezithile zokuthola imvume. Okubaluleke kakhulu, okunye okuqukethwe kuvinjelwe kwezinye izifunda.
Yingakho udinga umhlinzeki wesevisi we-VPN onekhono ukusakaza okuqukethwe kwakho kwe-Disney Plus ngaphandle komkhawulo.
Kungani Ungafinyeleli I-Disney Plus?
Ungafinyelela kokuqukethwe kweDisney Plus uma uthola okubhaliselwe. Kodwa-ke, uma ungakwazi ukuthola iDisney + esitolo sokudlala esinqunyiwe, kungenzeka ingatholakali ezweni lakho, lokho kungenxa yokuvinjelwa kweGeo okusetshenziswa yiDisney.
Uma kutholakala ezweni lakho, kepha kunokunye okuqukethwe okungekho kuhlelo lokusebenza, kungenzeka ukuthi kube ukuvinjelwa kwe-Geo. Nakhu ukubuka konke okusheshayo kokuthi kusho ukuthini ngakunye kwalokhu:
Ukubuyekezwa kwe-AVG VPN (2020) - Ingabe Uyakudinga Ngempela Lokhu?
Ukuvimbela i-Geo kulapho okuqukethwe, uhlelo lokusebenza, ipulatifomu, noma iseva, ngokuyisisekelo noma yini ehlobene ne-intanethi, ivinjelwe esifundeni sakho. Kungenziwa nguHulumeni wakho, njengoba kubonwa kakhulu eChina noma kubahlinzeki.
Uma abahlinzeki bekwenza, isizathu kungaba ukuthi bazama ukuthola uhlelo lokusebenza. Kodwa-ke, abanazo zonke izimvume.
Umkhawulo we-geo yinguqulo encane ye-Geo-blocking. Kulokhu, ungahle ungafinyeleli kokuqukethwe kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-Disney plus olutholakala kwamanye amazwe. Kungahle kube ngenxa yemithetho ethile. Okunye okuqukethwe akufani nebhodi ye-Network noma ye-Censor Yezwe. Abanye bangacasula ngqo noma bangathandeki.
Kulezi zimo, okuqukethwe kuvinjelwe. Ukuvinjelwa kweminyaka nakho kungenye indlela. Uma ungemdala ngokwanele ngokuya ngemithetho yezwe lakho, awukwazi ukubuka okuqukethwe.
I-VPN ehamba phambili yeDisney Plus:
Unalezi zici engqondweni, i-VPN ikuvumela ukuthi weqe izithiyo ezinjalo futhi usakaze okuqukethwe kwakho. I-VPN izoxhuma kumaseva atholakala kwamanye amazwe ukuze ubuke futhi usakaze okuqukethwe kwakho okuthandayo ngaphandle kwenkinga. Ngakho-ke, nalu uhlu lwama-VPN ayisikhombisa anolwazi kakhulu weDisney Plus namanye izinhlelo zokusebenza zokusakaza :
Ukuqala ohlwini, sine-Nord VPN ekhula ngokuya ngokuthandwa. Ikulethela uxhumano lwejubane elikhulu nokutholakala emazweni angaphezu kwe-60 kanye namaseva angaphezu kwe-5,000. Ungayisebenzisa cishe kunoma iyiphi idivayisi! Uma ukhetha ukubhaliswa kwe-premium kwe-Nord, ungayisebenzisa kumadivayisi ayisithupha ahlukene. Ngakho-ke, kuyinani eliphakeme lemali.
Kanye nesivinini se-Ultra-fast, uthola izici eziningi, ukuphepha kwe-VPN njengokufihla nokubethela, nokunye okuningi. Kungaba ngentengo encane kumuntu oyedwa, kepha uma uthola abantu abayisithupha ukuba bangene, une-VPN engabizi kakhulu. Akungabazeki ukuthi yi-VPN esezingeni lomhlaba yeDisney plus.
I-NordVPN Black Friday - 83% OFF (Amadili amahle)
Uma i-Nord ingatholakali ezweni lakho, ungakhetha i-Express VPN ngokutholakala kwayo okumangazayo emazweni angaphezu kwe-160. Inamaseva angaphezu kwe-3,000, okuyingxenye yeNord, kepha ngalinye lisebenza kahle kakhulu. Uma ufuna ukusakaza i-Disney kunoma iyiphi idivayisi, ungabhalisela ku-Express futhi ujabulele kuze kufike kumadivayisi we-5 we-VPN.
Ingxenye ehamba phambili nge-VPN ukuthi isebenza kahle kunoma iyiphi idivayisi nakuplatifomu, kufaka phakathi iziduduzi zemidlalo. Inesandiso seziphequluli nokuthi yini. Uma ufuna ngempela ukuthola ukufinyelela kokuqukethwe kweDisney Plus, lena yi-VPN enhle. Inezici eziningi ezithuthukile, njengokushintshwa kokubulala nokuhlukaniswa kwemigudu. Ergo, uqinisa ukuphepha kwakho kwe-inthanethi. Ngaphandle kokuzijabulisa okungenamkhawulo, uthola ukuphepha okuqinile! Isebenziseka kalula futhi inesivikelo sebanga lezempi.
I-ExpressVPN Black Friday - Iziphesheli ezinhle
Nayi i-VPN ejwayelekile enengqondo etholakala emazweni angaphezu kwama-60 futhi ikhula ngokungaguquguquki. Uthola amaseva azungeze i-1,700 noma ngaphezulu. Ngokufana namanye ama-VPNs, unokuhambisana kwendawo yonke. Kodwa-ke, okwenza iSurfShark ivelele ukuthi ungayisebenzisa kumadivayisi amaningi ngendlela othanda ngayo ngokubhalisa okukodwa.
Kuyi-VPN ebangeni lezempi ekulethela ikhono eliphakeme lokwenza ngokwezifiso ngohlu olumhlophe. Ngamazwi alula, unganquma ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezingasebenzisa i-VPN. Ungajabulela ukunikezwa okuningi ngeSurfShark ongeke ukuthole kwamanye ama-VPN. Kodwa, ungathola imikhawulo ethile ekwenzeni lula amandla ezinye izinhlelo zokusebenza. Izosebenza kahle kwiDisney Plus.
Enye i-VPN ejwayelekile ongayisebenzisa kunoma iyiphi idivayisi. Uthola ukufinyelela enanini elihloniphekile lamaseva (1,500+) ngokutholakala kuwo wonke amazwe alungile. Okubaluleke nakakhulu, ungasebenzisa ukubhalisa okukodwa kumadivayisi amaningi ngendlela othanda ngayo.
Ngeza lokho kusipele sesitoreji sokubethela, futhi unesivumelwano esiheha kakhulu. Uma ungafuni ukubhalisa usuka nje ku-bat, ungazama isivivinyo sezinsuku ezingama-30, okwenza kube i-VPN enhle kakhulu ongayisebenzisa Uma ungaqiniseki ukuthi ukusebenzisa i-VPN kuyisinqumo esifanele, icala lizokusiza wenze isinqumo esingcono. Ngamazwi alula, uma ufuna umhlinzeki we-VPN osebenza kahle futhi osebenza ngokujwayelekile, lena-ke ye-Disney Plus yakho.
Nakhu okunye okungeziwe okwazi kahle ohlwini. ICyberGhost inamaseva amaningi kuneNord noma i-ExpressVPN, enezingaphezu kuka-6,400 ohlwini. Kuyatholakala nasemazweni angama-90, futhi ukubhalisa okukodwa kusebenza kumadivayisi afinyelela kwayisikhombisa.
Kugqamile ngenxa yokuxhasa kwayo i-Public Wi-Fi. Ngakho-ke, uma uhamba kakhulu noma ufuna ukufinyelela okuqukethwe kwakho kwe-Disney kusuka endaweni ekude, lokhu kungenye yezinketho ezinhle kakhulu. Iphephe kakhulu nge-Wi-Fi yakho. Yize ingenakho ukusebenzisana okubanzi njengamanye ama-VPN, isekela konke okukhethiwe okuvame kakhulu. Okubaluleke kakhulu, inkampani ivame ukukhipha izinhlinzeko ezahlukahlukene nezaphulelo ongazijabulela.
Uma ungakushaya indiva iqiniso lokuthi leli liyatholakala emazweni azungeze ama-30 futhi linezinga eliphansi lamaseva, azungeze i-950, iStrong VPN inikeza okuningi etafuleni. Ngokubhalisa okukodwa, ungakusebenzisa kumadivayisi ayi-12, ngakho-ke kulula kuwe ukwehlukanisa intengo.
Isici esigqame kakhulu ukuhambisana kwefu okuletha isitoreji esikhulu se-250 GB. Ungayisebenzisa ukulanda noma ukugcina okuqukethwe kwakho kusuka emhlabeni wonke ngaphandle kwenkinga. Elinye iphuzu lokuthengisa eliphakathi ukubambisana kwe-WireGuard.
Ngokubhaliswa okunamandla kwe-VPN, ungafinyelela inqwaba yezinhlelo zokusebenza nezinsiza ezinikezwa yi-WireGuard. Kubandakanya ama-boosters amaningi, i-anti-virus, i-anti-malware, isithuthukisi sokusebenza, kanye nokugcina. I-VPN isha sha futhi okwamanje iyandiswa. Ngalokho elikunikezayo, linokuthengiselana okuhle kakhulu kulo.
6. Ukufinyelela i-Inthanethi kwangasese
Mhlawumbe awufuni ukuntuleka kwamazwe futhi udinga inani eliphakeme kakhulu lamaseva? Ngemuva kwalokho unokufinyelela kwe-Inthanethi kwangasese. Le VPN iyinsiza esebenza kahle kakhulu kangangokuba unenani eliphakeme kakhulu lamaseva. Ngaphezulu kwamaseva we-12,000 asho ukuthi awusoze waba nenkinga yokusakaza nokuthola okuqukethwe kwakho kwe-Disney Plus okuthandayo.
Akukona konke lokho! Ungayixhuma namadivayisi afinyelela kwangu-10 kokubhaliselwe okukodwa. Kulula ukuyisebenzisa nge-interface yomsebenzisi-enobungane. Azikho izici eziningi kakhulu, kepha uma ufuna i-VPN eyenza umsebenzi wenzelwe ukusakazwa kweDisney +, lena yiyona.
Izindleko zokubhalisa zincintisana kakhulu, futhi uthola ama-VPN Gateways amaningi. Ngakho-ke, amarekhodi akho awaziwa ngokuphelele, futhi azikho izingodo. Kodwa-ke, ayinikezi ukuphepha nezinye izinsiza ama-VPN amaningi ahambisana nawo. Akunandaba, kuyisinqumo esihle kakhulu.
1Q. Yini Into Ebaluleke Kakhulu Ku-VPN?
Iminyaka:I-VPN kufanele kube lula ukuyisebenzisa futhi iyahambisana nedivayisi ohlela ukuyisebenzisa neDisney Plus. Uma inikeza ukuphepha okungeziwe okufana ne-anti-malware, ukubethela, noma ukugcina, lokho kuhlanganisa okukhulu. Kodwa-ke, ukutholakala kweseva kuyinto ebaluleke kakhulu nezwe.
2Q. Yini Iseva Engcono Kakhulu Yokuxhuma I-Disney Plus?
Iminyaka:Noma iyiphi iseva evela e-USA yiseva ehamba phambili ye-Disney Plus VPN yakho. Izokulethela ukufinyelela uhla oluphelele lokuqukethwe ngaphandle kwemingcele. Ngakho-ke, uzokwazi ukujabulela i-Disney + yakho ngokuqukethwe kwenhliziyo.
3Q. Kungani Kufanele Ngithole i-Premium ye-VPN YeDisney?
Iminyaka:Ama-VPN amaningi wamahhala angangqongqoza noma athengise idatha yomuntu wesithathu kwabanye abathengisi bezikhangiso. Abanye bangaba nomkhawulo othile we-Bandwidth futhi bazonciphisa ukuxhumana kwakho. Ngamazwi alula, bangahle banele ukukuthola, kodwa hhayi okuthile ongathanda ukusakaza iDisney Plus.
Ngaphandle kwezingozi ezingaba khona, ungafaka imininingwane yakho engozini. Kodwa-ke, ama-VPN we-premium awagcini izingodo zokusebenzisa kwakho. Ugcina ukungaziwa ngokuphelele ngenkathi ufinyelela i-inthanethi. Okubaluleke nakakhulu, ijubane lakho liqinile, futhi uthola ukuphepha okwengeziwe kwe-intanethi.
4Q. Ingabe Kusemthethweni Ukusetshenziswa kwe-VPN Ukusakaza i-Disney +?
Iminyaka:Yebo, akukaze kube nomthethonqubo ovimbela ukusetshenziswa kwe-VPN. Ungasebenzisa VPN ngokusemthethweni ukufinyelela okuqukethwe. Kuyafana nokuhambela amanye amazwekazi nokufinyelela izinhlelo zakho zokusebenza ozithandayo nokuthi yini. Iziphequluli eziningi ziza ne-VPN, futhi cishe yonke inkampani, kufaka phakathi ama-tech giants, isebenze ekukhipheni izinsizakalo zayo ze-VPN.
Ngayinye yalezi inikeza ukusebenza okuphawulekayo. Ama-VPN amaningi anganciphisa ijubane lakho njengoba uxhuma kwamanye amaseva. Kodwa-ke, lawa ma-VPN azogcina isivinini sakho sokulanda nokulayisha kahle. Ngakho-ke, ungakwazi ukujabulela ukusakazwa kwe-HD nokuningi ngeDisney Plus yakho.
Ungavumeli imigoqo yesifunda noma yobungxiwankulu ikuvimbe ekujabuleleni okuqukethwe okukufanele. Ngemuva kwakho konke, ukhokhela okubhaliselwe okuphelele, futhi unelungelo lokukufinyelela. Manje jabulela ukusakazwa noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi, ikakhulukazi uma uhamba, ngalawa ma-VPN amahle kakhulu we-Disney plus.
I-VPN ehamba phambili yeFireStick
I-VPN Black Friday - Thatha Isaphulelo esingu-90%
Amahedfoni amahle kakhulu we-iPhone 12, 12 Pro Max & Mini
Ungawathola Kanjani Amakhadi Ezipho wamahhala e-Amazon
Ama-Pads Wokushaja Okungenantambo ahamba phambili (2020) - I-Android ne-iPhone
Ungayikhansela Kanjani i-Akhawunti ye-Disney Plus?
I-Youtube TV vs Hulu Live - Yikuphi okuyisevisi ehamba phambili?
Ungayithola Kanjani i-IPTV yamahhala?
Ungalilungisa Kanjani Iphutha Lokudlala le-YouTube?
Ungayabela Kanjani i-RAM Engaphezulu ku-Minecraft?
I-Twitch Prime Free Games - Disemba 2020
Ungayicisha Kanjani Imodi Ephephile Ku-Tumblr?
Amabhodi wamama we-X570 amahle kakhulu ngo-2020 - Umhlahlandlela Wokuthenga onezibuyekezo
ama-movie wamahhala we-hd nezinhlelo ze-tv
ulanda kanjani i-iTunes kwikhompyutha yakho
mp3 download ungavinjelwe esikoleni
ibiza malini i-robux
ama-movie wamahhala we-youtube wamahhala abukela online
ikhokhwe full movie download free
izinhlelo zokusebenza zamakhadi wesipho se-amazon